ဂျိမ်းစ် ဟာ ဘယ်တော့မှ ပျောက်ကွယ်သွားမယ့်သူမဟုတ်ဘူးလို့ ချီးကျုးလိုက်တဲ့ ဆိုးလ်ရှား - Shwe Soccer
ဂျိမ်းစ် ဟာ ဘယ်တော့မှ ပျောက်ကွယ်သွားမယ့်သူမဟုတ်ဘူးလို့ ချီးကျုးလိုက်တဲ့ ဆိုးလ်ရှား
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းနည်းပြ ဆိုးလ်ရှား က ခြေစွမ်းကောင်းတွေပြန်ရနေတဲ့ ဒန်နီရယ်လ်ဂျိမ်းစ် ကို ချီးကျုးဂုဏ်ပြုလိုက်ပြီး သူဟာ ဘယ်တော့မှ ပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ပြောလိုက်ပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းက နယူးကာဆယ် အသင်းကို (၃)ဂိုး-(၁)ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရတဲ့ ပွဲမှာ ဒန်နီရယ်လ်ဂျိမ်းစ် က (၁)ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီး၊ ရက်ရှ်ဖိုဒ့် နဲ့ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်တို့ကလည်း (၁)ဂိုးစီသွင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဝေးလ်စ် လက်ရွေးစင် ကစားသမား ဟာ ဆိုစီဒက် အသင်းကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ယူရိုပါလိဂ်ပွဲစဉ်မှာလည်း မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အတွက် ဂိုးသွင်းခဲ့ပြီးနောက် (၄)ရက်အကြာမှာ နောက်ထပ်သွင်းဂိုးတစ်ဂိုးကို ထပ်မံရယူနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုးလ်ရှား က “သူဟာ ဘယ်တော့မှ ပျောက်ကွယ်သွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။သူဟာ အနောက်ကွယ်ကနေ အလုပ်ကို ကြိုးကြိုးစားစားလုပ်ဆောင်နေတာပါ။သူ့ရဲ့စွမ်းအင် အရှိန်အဟုန်နဲ့ အတူ ခင်ဗျားတို့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ နေရာမှာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ သူက အမြဲတမ်းအသင့်ရှိနေတဲ့သူပါ”
Manchester United’s Welsh midfielder Daniel James (C) prepares to shoot at goal to score his team’s second goal during the English Premier League football match between Manchester United and Newcastle at Old Trafford in Manchester, north west England, on February 21, 2021. (Photo by Stu Forster / POOL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or ‘live’ services. Online in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No video emulation. Social media in-match use limited to 120 images. An additional 40 images may be used in extra time. No use in betting publications, games or single club/league/player publications. / (Photo by STU FORSTER/POOL/AFP via Getty Images)
“ကျွန်တော်တို့ဟာ သူနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ပြီး၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ လူတိုင်းကို ကူညီဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် ဒန်နီရယ်လ် က ချန်ပီယံရှစ်ကနေလာတာပါ။သူဟာ ပထမဆုံးပွဲတွေမှာ ဂိုးအနည်းငယ်သွင်းယူခဲ့ပါတယ်။
သူဟာ နှိမ့်ချတက်ပြီး ကြံခိုင်မှုအပြည့်အဝပြန်ရဖို့ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူ့ကိုယ်သူယုံကြည်ဖို့နဲ့ ဒါမှလည်း ဒီထက်ပိုပြီး ယုံကြည်မှုရှိလာမှာပါ”လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ဒီပွဲအနိုင်ရခဲ့တဲ့ အတွက် တတိယနေရာက လက်စတာ အသင်းနဲ့ ရမှတ်တူ ဂိုးကွာခြားချက်နဲ့ အဆင့်(၂) နေရာမှာ ဆက်လက်ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းဟာ လာမယ့်အပတ်မှာတော့ ပရီးမီးယားလိဂ် ပွဲစဉ်အဖြစ် ချယ်လ်ဆီး အသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္ အသင္းနည္းၿပ ဆိုးလ္ရွား က ေျခစြမ္းေကာင္းေတြျပန္ရေနတဲ့ ဒန္နီရယ္လ္ဂ်ိမ္းစ္ ကို ခ်ီးက်ဳးဂုဏ္ျပဳလိုက္ၿပီး သူဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ေျပာလိုက္ပါတယ္။
မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္ အသင္းက နယူးကာဆယ္ အသင္းကို (၃)ဂိုး-(၁)ဂိုးနဲ႔ အနိုင္ရတဲ့ ပြဲမွာ ဒန္နီရယ္လ္ဂ်ိမ္းစ္ က (၁)ဂိုးသြင္းယူခဲ့ၿပီး၊ ရက္ရွ္ဖိုဒ့္ နဲ႔ ဘ႐ူနိုဖာနန္ဒက္စ္တို႔ကလည္း (၁)ဂိုးစီသြင္းယူခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ေဝးလ္စ္ လက္ေရြးစင္ ကစားသမား ဟာ ဆိုစီဒက္ အသင္းကို အနိုင္ရခဲ့တဲ့ ယူရိုပါလိဂ္ပြဲစဥ္မွာလည္း မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္ အတြက္ ဂိုးသြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ (၄)ရက္အၾကာမွာ ေနာက္ထပ္သြင္းဂိုးတစ္ဂိုးကို ထပ္မံရယူနိုင္ခဲ့တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။
ဆိုးလ္ရွား က “သူဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာမဟုတ္ပါဘူး။သူဟာ အေနာက္ကြယ္ကေန အလုပ္ကို ႀကိဳးႀကိဳးစားစားလုပ္ေဆာင္ေနတာပါ။သူ႔ရဲ့စြမ္းအင္ အရွိန္အဟုန္နဲ႔ အတူ ခင္ဗ်ားတို႔ ကြဲျပားျခားနားတဲ့ ေနရာမွာအသုံးျပဳနိုင္ဖို႔ သူက အျမဲတမ္းအသင့္ရွိေနတဲ့သူပါ”
“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ သူနဲ႔အတူတူအလုပ္လုပ္ၿပီး၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ လူတိုင္းကို ကူညီဖို႔ ႀကိဳးစားေပမယ့္ ဒန္နီရယ္လ္ က ခ်န္ပီယံရွစ္ကေနလာတာပါ။သူဟာ ပထမဆုံးပြဲေတြမွာ ဂိုးအနည္းငယ္သြင္းယူခဲ့ပါတယ္။
သူဟာ ႏွိမ့္ခ်တက္ၿပီး ႀကံခိုင္မႈအျပည့္အဝျပန္ရဖို႔ အလုပ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ဒါေပမယ့္ သူ႔ကိုယ္သူယုံၾကည္ဖို႔နဲ႔ ဒါမွလည္း ဒီထက္ပိုၿပီး ယုံၾကည္မႈရွိလာမွာပါ”လို႔ ဆိုခဲ့ပါတယ္။
မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္ အသင္းဟာ ဒီပြဲအနိုင္ရခဲ့တဲ့ အတြက္ တတိယေနရာက လက္စတာ အသင္းနဲ႔ ရမွတ္တူ ဂိုးကြာျခားခ်က္နဲ႔ အဆင့္(၂)ေနရာမွာ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္ အသင္းဟာ လာမယ့္အပတ္မွာေတာ့ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္အျဖစ္ ခ်ယ္လ္ဆီး အသင္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
Previous Article မီလန်ဒါဘီမှာ အပြုံးပန်းဝေခဲ့ပြီး နှစ်ပေါင်း ၇၁ နှစ်ကြာက စံချိန်ကိုပါ လိုက်မှီခဲ့တဲ့ လူကာကူ
Next Article အာဆင်နယ်ကို မထိတထိနဲ့ ခနဲ့လိုက်တဲ့ ဂွာဒီယိုလာ